चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भब्य स्वागत, के-के हुदैछन् सम्झौता ? जापानको आँधीबेहरीमा नेपालीको अवस्थाप्रति दूतावास मौन (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भब्य स्वागत, के-के हुदैछन् सम्झौता ? जापानको आँधीबेहरीमा नेपालीको अवस्थाप्रति दूतावास मौन (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Oct 12, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विषेश कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४४२ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपालमा, नेपाल–चीनबीच के–कस्ता सम्झौता हुदैछन् ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ शनिबार नेपाल आइपुगेका छन् । भारतको औपचारिक भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि शनिबार साँझ नेपाल आइपुगेका हुन् । उनको स्वागतका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु सीको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भएको हो । सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच विभिन्न दुईपक्षीय सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुने्छ ।
२. एकजना चिकित्सकको भरमा डडेल्धुरा अस्पताल !
डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममा रहेको ‘डडेल्धुरा अस्पताल’लाई सरकारले देशका विशिष्ट अस्पतालका रुपमा घोषणा गरेपनि डाक्टर नहुदा यहाँ सामान्य उपचार पनि हुन सकिरहेको छैन् । अहिले विशेषज्ञ सेवासहितको विशिष्ट अस्पताल एकजना चिकित्सकको भरमा चलिरहेको छ । दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नपाइकनै नाम परिवर्तन गरी संघीय सरकारको मातहतमा रहेकोे अस्पताल कर्मचारी समायोजनको चपेटामा पर्दा झनै समस्यामा परेको हो । चिकित्सक अभाव, कर्मचारीको अभाव तथा भौतिक संरचनाको समेत अभाव हुँदा अहिले अस्पतालमा पोष्टमार्टमका लागि पनि अन्य जिल्लाबाट चिकित्सक बोलाउनुपर्ने वा शब पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
३. जापानमा शक्तिशाली ताइफुन, नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि मौन दूतावास !
जापानमा शक्तिशाली ‘ताइफुन’ आँधीबेहरीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । ताइफुनको पूर्व सूचना भएरपनि तयारी गरेर बसेकाहरु त्रासमा बाँचिरहेका छन् । यो ताइफुन आकार, गति तथा प्रभावको आधारमा हालसम्मकै शक्तिशाली रहने अनुमान गरिएको छ । हगिविस भनेर चिनिने यो टाइफुनले तोकाई तथा कान्तो क्षेत्रमा हिंसात्मक असर देखाइसकेको छ । शनिबार विहानैबाट सिजुवका तथा चिबा केनमा भौतिक तथा मानवीय क्षतिका घटनाहरु घटेका छन् । १० औं हजार घरहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द भइसकेको छ ।
बेल्जियमकी युवराज्ञी एष्ट्रिड र युवराज लोरेञ्जद्वारा भक्तपुर अवलोकन
अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख पदमा गराए उम्मेद्वारी दर्ता
एभरेष्ट पानोरामा रिसाेर्टमा अचेत भेटिएका आठै भारतीय पर्यटकको मृत्यु, ४ जना बालबालिका
ताप्लेजुङमा सवारीसाधन सिक्न अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हट्यो
नेपाली काँग्रेसले सभामुखमा दिएन उम्मेदवारी
‘भिडियो कन्फ्रेन्स’मार्फत मोदी र ओलीले गरे आईसीपीको उद्घाटन
access_time 12:58 pm
access_time 12:39 pm
access_time 12:36 pm
रामगोपाल तमखु, भक्तपुर, ०७ माघ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०७६को अवसर पारेर बेल्जियमकी युवराज्ञी एष्ट्रिड र
काठमाडौं, ०७ माघ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट नेता अग्निप्रसाद
काठमाडौँ, ७ माघ । मकवानपुरको एभरेष्ट पानोरामा रिसोर्टमा अचेत अवस्थामा भेटिएका ८ जना भारतीय पर्यटकको